China Gelatin Sheet fekitori uye vagadziri | Yasin
Gelatin Sheet, inonziwo Leaf Gelatin, inogadzirwa nefupa remhuka uye ganda iro rine 85% mapuroteni, mafuta-uye cholesterol-isina uye inosvinwa zviri nyore nemuviri. Iyo yakanakisa mhando gelatin jira rakagadzirwa kubva pfupa gelatin, iyo isiri hwema uye ine yakanaka jelly simba.
Gelatin Sheet rinoshanda kunge granular gelatin inowanikwa muchitoro chako chemuno, asi mune imwe fomu. Panzvimbo pehupfu, zvinotora zvimiro zvemashizha matete emashizha egelatin firimu. Iwo machira anonyunguduka zvishoma nezvishoma kupfuura iyo granulated fomu, asi zvakare inogadzira yakajeka gelled chigadzirwa.
Jelly Simba Bloom 120-230Bloom
Viscosity (6.67% 60 ° C）) mpa.s 2.5-3.5
Gelatin Sheet rinoshandiswa zvakanyanya kugadzira pudding, jelly, mousse keke, gummy candy, marshmallows, madhiri, ma yogurts, ice cream uye zvichingodaro.
Kubatsira kweGelatin Sheet
Simba Rakasimba Rinotonhora
Nei Tichifanira Sarudza yedu Gelatin Sheet
1. Yekutanga Gelatin Sheet Mugadziri muChina
2. Yedu mbishi zvinhu zvegelatin machira anobva kuQinghai-Tibet Plateau, saka zvigadzirwa zvedu zviri mune yakanaka hydrophilicity uye chando-nyungudika kugadzikana pasina hwema
3. Iine 2 GMP mafekitori akachena, 4 yekugadzira mutsara, yedu yegore goho inosvika mazana mashanu matani.
4. Mahwendefa edu egelatin anonyatso tevera iyo GB6783-2013 Standard yeHeavy Metal iyo iyo Index: Cr≤2.0ppm, yakaderera pane EU standard 10.0ppm, Pb≤1.5ppm yakaderera pane EU standard 5.0ppm.
Giredhi Bloom NW
(g / jira) NW(pabhegi) Kurongedza Detail NW / CTN
Ndarama 220 5g 1KG 200pcs / bhegi, 20bags / katoni 20 makirogiramu
3.3g 1KG 300pcs / bhegi, 20bags / katoni 20 makirogiramu
2.5g 1KG 400pcs / bhegi, 20bags / katoni 20 makirogiramu
Sirivheri 180 5g 1KG 200pcs / bhegi, 20bags / katoni 20 makirogiramu
Mhangura 140 5g 1KG 200pcs / bhegi, 20bags / katoni 20 makirogiramu
Inofanira kuchengetwa pane tembiricha ine mwero, kureva kwete padyo neboiler-kamuri kana injini-kamuri uye isina kuratidzwa nekupisa chaiko kwezuva. Kana yakarongedzwa mumabhegi, inogona kurasikirwa nehuremu pasi pemamiriro akaoma